Rivo-doza nanafika tany Fidji, Tonga ary Maorisy
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Rivo-doza nanafika tany Fidji, Tonga ary Maorisy
Desambra 30, 2019
Misy ny tafiotra mahery vaika any amin'ny Pasifika sy ny Ranomasimbe Indianina. Olona iray no namoy ny ainy tany Fiji ary ny iray tsy hita popoka satria namely ny firenena ny rivodoza tropikaly Sarai androany ary mifanohitra amin'izay nandrasan'ny serivisy nasionaly momba ny toetrandro.
Ny biraom-pirenena Fiji National Disaster Management Office dia nilaza fa olona iray no notsaboina fatratra ary olona maherin'ny 2,500 no nafindra tany amin'ny foibe fitsoahana 70.
Nikisaka nianatsinanana ny rivodoza sahabo ho 10 km / ora ary nandrasana hamonjy ny rano Tonga ny talata.
Ny Sampan-draharaha Meteorolojika Tonga dia namoaka fampandrenesana oram-be sy tondra-drano lehibe ho an'ny firenena iray manontolo.
Mandritra izany fotoana izany any amin'ny Ranomasimbe Indianina, i Maorisy dia miomana ho amin'ny rivodoza Calvinia. Navoaka ny fampandrenesana sokajy 3 amin'ny 9 ora maraina eo an-toerana dia nahatonga ny fanafoanana ny sidina rehetra hiditra sy hivoaka an'i Maurice.
Noho ny vanim-potoanan'ny taom-baovao dia misy hotely fitsangatsanganana miaraka amin'ireo mpizahatany.
Namoaka an'ity fampandrenesana ity ho an'ny Maorisy ny tompon'andraikitra: "Nandritra ny ora vitsy lasa izay, ny tafio-drivotra mahery vaika dia nijanona sahabo ho 120 km atsinanan'ny Mahebourg teo akaikin'ny teboka 20.7 degre atsimo sy 58.5 degre atsinanana. Mitohy mihamatanjaka izy ity ary hetsika mankany andrefana no hampanakaiky kokoa an'i Maorisy ny foibe.
Ny toe-javatra siklonic, izay fitsangantsangan'ny rivotra araka ny filaharan'ny 120 km / ora, dia mety hitranga any Maurice amin'ny tolak'andro.
Ireo tarika rahona mavitrika mifandraika amin'ny CALVINIA dia hitazona ny toetr'andro hatrany Maorisy.
Ho avy ny orana. Ny orana dia ho antonony ka hatramin'ny orambe indraindray amin'ny oram-baratra. Hisy ny fanangonana rano sy tondra-drano ao an-toerana. Ny vahoaka any Maorisy dia atoro hevitra mba hamita ny fitandremana rehetra. Ho avo ny ranomasina. Ny torolàlana an-dranomasina dia tsy torohevitra mafy.
Bitsika iray ao an-toerana no mitatitra ny ady tany amin'ny mpivaro-mofo: Hoy ny sioka: “Be olona azo antoka fa ny tena zava-dehibe dia MITADIAVA ary tadiavo ireo zokiolona sy biby! Mahita ady any amin'ny mpivaro-mofo. Air Mauritius dia hamoaka kaomina hijanonana amin'ny asany ara-potoana, fa ny tranokalan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia toa fampahalalana efa antitra mampiseho sidina miala amin'ny Alatsinainy tolakandro.
Raha ny loharanom-baovao eTN dia tonga tampoka ny fampitandremana sokajy 3 ka nahatonga ny nofy ratsy ho an'ny firenena nosy. Niainga ny olona vao hiasa ny maraina, fa ny fepetra sokajy 2 ihany no andrasany. Rehefa nambara ny fampitandremana avo dia iray alina no nandeha teny an-dalana hody.
Maorisy dia manana fotodrafitrasa azo antoka ho an'ny Cyclones. Anisan'izany ny rafitra azo antoka azo antoka, koa ho an'ny hotely sy hotely.
The Rapid Response ny rafitry ny Birao Afrikana misahana ny fizahan-tany dia miambina ary mampahafantatra ny Fiaretana sy fitantanana krizy manerantany
Checkpoint Charlie nitifitra: nirohotra nankany amin'ny toerana fizahan-tany malaza any Berlin ny polisy
Mampidi-doza loatra ve ny manidina amin'ny seranam-piaramanidina fananan'i Lufthansa?
St. Kitts & Nevis dia manavao ny torohevitra momba ny dia ho an'ny mpandeha avy any Brezila, India, Afrika atsimo ary UK
Greyhound Canada no mamarana ny serivisy rehetra any Canada
Manafoana ny sidina Tel Aviv ny Ukraine International Airlines
Ny Airlines dia tsy maintsy manangana fiaraha-miasa misy dikany mba hiatrehana ny fitohizan'ny tontolo iainana
Hataon'i India any Tokyo ve ny fikorontanan'ny seranam-piaramanidina Vistara?
Manamarika ny faha-19 taonany ny Air Astana ao Kazakhstan